अष्ट्रेलियाको संघीय सरकार र भिक्टोरिया राज्यबीचको तनाव, १७ न्यूजिल्याण्डका यात्री ! « MNTVONLINE.COM
अष्ट्रेलियाको संघीय सरकार र भिक्टोरिया राज्यबीचको तनाव, १७ न्यूजिल्याण्डका यात्री !
सुरुमा १४ जना भनिएपनि न्यूजिल्याण्डबाट शुक्रबार राति मेलबर्न आइपुगेका १७ जना यतिबेला अष्ट्रेलियाको संघीय सरकार र भिक्टोरियाराज्यबीचको तनावको विषय बनेका छन् । करिब ७ महिनापछि कोरोनाको समूदायस्तरमा संक्रमण नभएको न्यूजिल्याण्डसँग सुरु भएको हवाई सेवामार्फत आएका सैयौं यात्रीमध्ये १७ जना मेलबर्न एयरपोर्टमा देखा परे । उनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय यात्रीको रुपमा हेर्ने कि अष्ट्रेलियाकै आन्तरिक यात्रीका रुपमा बुझ्ने भन्ने प्रश्नले नै यो तनाव बढाएको छ ।
यस विषयमा भिक्टोरियाका प्रिमियर डेनियल एन्ड्रयूले प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले पत्र लेखेर अब थप अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु भिक्टोरिया नआउन् भन्ने सन्देश दिइसकेका छन् भने संघीय सरकारको बचाउ गर्दै कार्यवाहक अध्यागमन मन्त्री एलन टजले सिड्नी आइपुगेका न्यूजिल्याण्डका यात्रीहरुले क्वारेन्टाईनमा बस्न नपर्ने बताइरहेका छन् । यसको अर्थ न्यूजिल्याण्डसँगको हवाई सेवा सुचारु गरेका राज्यहरु न्यूसाउथवेल्स र नर्दन टेरेटोरी बाहेक पनि उनीहरु जान पाउने विषयतर्फ उनको संकेत देखिन्छ ।
विमानस्थलमा ओर्लिएपछि बोर्डर फोर्सका अधिकारीहरुले उनीहरुको आगमनको सूचना राज्य सरकारलाई उपलब्ध नगराएको एकातिर भिक्टोरिया राज्य सरकारको दावी छ भने अर्कोतर्फ अध्यागमन मन्त्री टज भने यात्रु कार्ड भिक्टोरिया राज्यलाई दिइएको बताउँछन् । अहिले भिक्टोरिया प्रहरीले ति १७ यात्रुलाई खोजी गरी उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था र उनीहरुले गएको १४ दिनमा कहाँ कहाँ भ्रमण गरेका थिए यसको खोजी गरिरहेको छ ।
सुरुमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको भनिएपनि ति यात्रीलाई पक्राउ भने नगरिएको भिक्टोरिया प्रहरीका डेपुटी कमिश्नर रिक नुगेन्टले जानकारी दिएका छन् । यो विषयले संघीय सरकार र भिक्टोरिया सरकारबीचको तनावलाई केही समय अझ थप ऊर्जा दिने मानिएको छ ।